सांगीतिक क्षेत्रमा नामचलेकी गायिका हुन्, रजिना रिमाल । बाल्यकालदेखि नै गायन क्षेत्रमा लगाब राख्ने रजिनाले हालसम्म लगभग १५०० सय गीत गाइसकेकी छिन् । केहि महिनाअघि विवाह बन्धँनमा बाँधिएकी गायिकाको आगामी गायन यात्रामा केन्द्रित रहे रेजिना पाण्डेले गरेको कुराकानी । कस्तो चल्दै छ वैवाहिक जीवन ? राम्रो छ, रमाइलो ढंगले छचलिरहेको छ । विवाहअघि र पछिको जीवनमा के भिन्नता पाउनुभयो ? केही न केही फरक त… विस्तृत समाचार
​फेसबुकले नायिका बनायो- प्रेक्षा बज्राचार्य, नवनायिका
ग्लामर क्षेत्रमा सानैदेखि रुचि राख्दै आएकी प्रेक्षा बज्राचार्य अन्ततः रजतपत्रमा प्रवेश गरेरै छाडिन् । चलचित्र ‘जात्रा’बाट डेब्यू गरेकी प्रेक्षालाई अभिनय मात्र होइन, नाच्न र गाउन औधी मनपर्छ । युट्युवमार्फत आफ्ना क्रियशन प्रस्तुत गदै आएकी प्रेक्षा आईटी स्टुडेन्ट पनि हुन् । बहुप्रतिभाकी धनी उनै प्रेक्षासँग रेजिना पाण्डेले गरेको कुराकानी ः चलचित्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ? रवीन्द्रसिं बानियाँ जीले चलचित्रको कन्सेप्टसहित मलाई अफर गर्नुभयो । मैले स्क्रिप्ट… विस्तृत समाचार
​उमेर भयो, लगन जुरेन-जोत्स्ना योगी, नव नायिका
नेपाली चलचित्र ‘म त तिम्रै हु“’ बाट रंगिन पर्दामा डेब्यु गरेकी नायिका हुन् जोत्स्ना योगी । थुप्रै म्युजिक भिडियो र विज्ञापनमा अभिनय गरिसकेकी जोत्स्ना आफू योग्य भएपछि मात्र चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताउ“छिन् । तर, उनको भविष्यको प्लान भने रंगिन दुनिया“मा सीमित छैन । आफ्नै बिजनेश सम्हाल्ने उनको भविष्यको योजना छ । त्यसो त अहिले पनि उनी बुबालाई साथ दिइरहेकी छन् । उनै नव नायिका… विस्तृत समाचार
रहरै रहरमा म्युजिक भिडियोमा काम गर्न थालेकी वर्षा रावतको रहर अहिले पेशामा बदलिएको छ । यतिखेर उनलाई भ्याई नभाई ६ सय जति म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी वर्षाले ‘नाई न भन्नु ल–४’ बाट चलचित्रमा डेब्यु गरेकी हुन् । दोस्रो चलचित्र ‘छक्का पन्जा’ बाट अत्याधिक सफलता पाइरहेकी वर्षाको चलचित्र ‘जात्रा’ले पनि यतिफेर चर्चा पाइरहेको छ । उनको कामको प्रशंसा गर्नेहरू यस क्षेत्रमा अहिले निकै बढेका छन् ।… विस्तृत समाचार
मोडर्न डान्स नेपाली युवाको पछिल्लो रोजाइ बनेको छ । मोडर्न डान्सको बढ्दो क्रेजकै कारण यतातर्फ आकर्षित भएकी डान्सर हुन्, रुबिना अधिकारी । करिअर बनाउनभन्दा मनभित्रको रुचि पूरा गर्न भनेर नाच्न थालेकी रुबिना अहिले चर्चित डान्सर बनेकी छन् । आखिर यो सफलता कसरी सम्भव भयो ? १९ वर्षीय रुबिनासँग जम्काभेटका लागि रेजिना पाण्डेले संवाद गरेकी छन् । नृत्यप्रति कसरी आकर्षण बढ्यो ? एसएलसी दिएपछि मेरा केही… विस्तृत समाचार
तीन वर्षदेखि तारा एयरलाइन्समा एयर होस्टेजको काम गरिरहेकी २५ वर्षीया सृष्टिना गुरुङले टाभल्स एन्ड टुरिजिममा ब्याचलर डिग्री गरेकी छिन् । एयर होस्टेज बन्छु भन्ने उनलाई कहिल्यै लागेकै थिएन । तर, संयोगले उनलाई कहिल्यै नसोचेकै काम जु¥यो । भविष्यमा भने उनले होटल लाइनमा केही नया“ काम गर्ने सोच बनाएकी छिन् । आत्मविश्वासी भएर महिलाहरूले सधै“ अगि बढ्ने प्रयत्न गनुपर्दछ भन्ने सोचाइ राख्ने सृष्टिनास“ग रेजिना पाण्डेले गरेको… विस्तृत समाचार
चितवन, १२ असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दसँैंअघि नै संविधान संशोधनको प्रस्तावको तयारीमा सरकार लागेको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर चितवनले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलसँग छलफल भइरहेको बताए । उनले भने ‘ नेकपा (एमाले)सँग पनि छलफल भइसकेको छ, राष्ट्रिय सहमतिमै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस हुन्छ ।’ मधेसी मोर्चासँग हिजो भएको छलफलमा पनि यो विषय जानकारी गराएको… विस्तृत समाचार
‹ First Newer56789Older